Ny Volavolan-kevitr'i Solomona Mpanjaka Fizarana 17, Ny Fiangonan'izao Tontolo Izao Andriamanitra Switzerland (WKG)
ENGLISH | Italiano | frantsay | español | Português
Fiteny hafa- Alemanina- Anglisy- Holandey- Danemark- Finnish- Soedoa- Norvezianina- poloney- Biolgara- Rosiana- Katalana- Basque- Irlandey- Welsh- Islandey- Grika- Gaelika Scottish- Tiorka- Slovenian- Okrainiana- romanianina- Armeniana- Azerbaijani- Litoanianina- Belarosiana- Estonianina- Georgia- Hongria- Galician- Bosnian- Makedoniana- Albaney- Slovak- Czech- Kroasia- Corsican- Kurdear (Kurmanji)- Latina- esperanto- hebreo- Persiana- Arabo- Japoney- Koreana- Shinoa (nentim-paharazana)- Filipino- Indonezianina- Latvian- Vietnamianina- Maltais- Thai- Hindi- Afrikaans- Malay- Swahili- Creole Haitian- Bengali- Java- Khmer- Lao- Maori- Marathi- Mongoliana- Nepali- Punjabi- Somali- Tamil- Kazakh- Malagasy- Hawaiian- Kyrgyz
Inona ny lohahevitra, ny teny filamatra ary ny hevi-dehibe ao amin'ny boky "Sprüche"? Inona no fototry ny lalantsika miaraka amin'Andriamanitra izay ambara amintsika ato amin'ity boky ity?
Ny fahatahorana ny Tompo no fahatahorana azy. Raha mila mamintina ny Bokin'ny Ohabolana iray ianao amin'ny andininy iray, dia ho inona izany? «Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandohan'ny fahalalana. Ny adala mandà fahendrena sy fananarana ”(Ohab. 1,7), Ny Ohabolana 9,10:XNUMX dia maneho zavatra mitovy: "Ny fiandoham-pahefana dia ny fahatahorana an'i Jehovah, ary ny mahafantatra ny olo-masina dia misy antony."
Ny fahatahorana ny Tompo no fahamarinana tsotra indrindra ao amin'ny Ohabolana.
Raha tsy manana ny fahatahorana ny Tompo isika dia tsy hanana fahendrena, fahiratan-tsaina ary fahalalana.Inona ny fahatahorana ny Tompo? Toa mifanohitra amin'izay. Amin'ny lafiny iray, Andriamanitra dia fitiavana ary amin'ny lafiny iray, antsoina isika hoe matahotra azy. Midika ve izany fa mampatahotra sy mampatahotra ary mampatahotra Andriamanitra? Ahoana no ahafahako mifandray amin'ny olona matahotra azy?
Ny fiankohofana, ny fifanajana ary ny fahagagana
Ny andalana voalohany amin'ny Ohabolana 1,7 dia somary sarotra takarina satria eto dia ny foto-kevitra "Aza matahotra" tsy voatery tonga ao an-tsaina rehefa mieritreritra an'Andriamanitra isika. Ny teny nadika hoe "tahotra", izay miseho amin'ny fandikana Baiboly maro, dia avy amin'ny teny hebreo hoe "yirah". Misy dikany maro io teny io. Indraindray dia midika ny tahotra tsapantsika rehefa miatrika loza lehibe sy / na fanaintainana izany, fa mety hidika koa hoe "fankalazana" sy "fahatahorana" izany. Iza amin'ireo dikan-teny ireo no tokony hampiasaintsika amin'ny andininy faha-7? Ny teny manodidina dia zava-dehibe eto. Ny dikan'ny hoe "tahotra" eto amintsika dia hazavaina eto amin'ny tapany faharoa amin'ilay andininy: ny adala manala ny fahendrena sy ny fifehezana. Ny teny manan-danja eto dia ny hanamavo, izay mety midika ihany koa fa mihevitra ny olona ho tsy misy dikany ianao na hanamavo azy. Azo ampiasaina koa izany hilazana olona masiaka sy mirehareha ary miady hevitra ary mino fa marina foana izy (Pro 14,3; 12,15).
Raymond Ortl ary nanoratra ao amin'ny bokiny Ohabolana hoe: “Teny tsy mankahala ary fandroahana mifandray amin'ny fifandraisana. Ny avonavona no eritreretinao fa ambony noho ianao ary marani-tsaina koa, tsara loatra ary sahirana amin'ny fankalazana sy fahatahorana. "
CS Lewis dia mamaritra ny karazana toe-tsaina toy izany ao amin'ny bokiny Pardon, Kristiana tonga lafatra aho: “Ahoana no ahitanao olona iray ambonimbony amin'ny lafiny rehetra? Raha tsy mahatsapa sy mahalala an'izany toa izany Andriamanitra ka mahita ny tenanao ho tsy misy fanoherana, dia tsy mahalala an'Andriamanitra ianao. Raha mbola mirehareha ianao dia tsy mahalala an'Andriamanitra. Ny olona mpirehareha dia manambany foana ny olona sy ny zavatra ary raha mbola mijery ianao dia tsy hitanao izay zavatra ambonin'izy ireo. ”
Ny "fahatahorana ny Tompo" dia tsy misy horohoro mampihorohoro amin'ny Tompo, toy ny hoe andriamanitra feno fahatezerana Andriamanitra. Ny fiankohofana dia midika fanajana sy manome voninahitra ny olona. Ny teny hoe "awe" dia foto-kevitra sarotra ampitaina ankehitriny, saingy teny ara-baiboly mahafinaritra izany. Ao anatin'izany ny hevitra momba ny fahagagana, talanjona, mistery, talanjona, fankasitrahana, fankasitrahana ary na dia ny fiheverana aza. Midika izany fa tsy mahay miteny. Ny fomba fihetsikareo rehefa sendra zava-tsarotra ianao na sendra zavatra mbola tsy niainanao hatrizay ary tsy afaka namoaka teny avy hatrany.
Mampahatsiahy ahy ny fahatsapana tsapako fony vao nahita ilay Grand Canyon. Tsy nisy na iray aza afaka naneho ity fahatsapana feno fankasitrahana tsapako ireto rehefa nahita ny hatsaran-tarehy sy ny famoronana lehibe teo anoloako. Tsara ny fanakorontanana lehibe. Ny teny adika toy ny kanto, manintona, manaitra, manintona, manintona ary manaitra dia afaka mamariparitra ireto tara-tendrombohitra ireto. Tsy nisy teny aho rehefa nijery avy tany ambony, ilay renirano midadasika, izay mihoatra ny iray kilometatra mahery at. Amiko. Ny hatsarana sy ny lokon'ny vatolampy ary ny karazana flora sy fauna lehibe - dia tsy afa-bela aho rehetra. Tsy misy ampahany amin'ny Grand Canyon misy fanindroany. Ny lokony, izay miovaova sy be pitsiny ao anatin'ny fotoana iray, dia nanova hatrany ny habetsahany ny tara-masoandro. Mbola tsy nahita zavatra toy izany mihitsy aho taloha. Tamin'izany fotoana izany dia nanjary natahotra kely aho satria nahatsapa ho kely sy tsy dia misy dikany.
Izany no karazana mahagaga misy ilay teny hoe manaitra. Saingy izao fahagagana izao dia tsy avy amin'ny famoronan'Andriamanitra fotsiny, fa midika koa io olona tonga lafatra sy amin'ny lafiny rehetra miavaka sy manintona io. Tonga lafatra foana izany, tonga lafatra ary ho lavorary foana. Ny zava-drehetra momba an'Andriamanitra dia tokony hanova ny fisainantsika ho gaga sy hidera ary hanala ny fanajantsika tanteraka. Tamin'ny alàlan'ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fitiavan-tsoa tsy manam-petra ho antsika dia raisina ao amin'ny mahantra sy tao am-pon'Andriamanitra isika. Mahatalanjona fa i Jesosy dia nanetry ny tenany ho antsika ary maty ho antsika aza. Mety ho nataony izany raha ianao irery no olona eto ambonin’ny tany. Izy no mpamonjy anao. Tsy ny fitiavana anao fotsiny no antony itiavanao anao satria tsy eto ambonin'izao tontolo izao ianao, fa eto an-tany ianao satria nentiny niditra teto amin'izao tontolo izao ary tia anao. Mahatalanjona ny zavatra rehetra noforonin'Andriamanitra, kanefa eo afovoan'ny lahatsoratra ianao, tahaka ny Salamo faha-8, dia momba ny Andriamanitra telo izay iray. Isika malemy, malemy, afaka mamaly afa-tsy amin'ny "Oay!"
"Nahita ny Tompo aho"
Augustine dia teolojiana kristiana voalohany izay nanoratra betsaka momba ny fahagagana mahatalanjona nataon'Andriamanitra. Ny iray amin'ireo asany lehibe indrindra dia antsoina hoe "De civitate Dei". Nandritra ny fahafatesany rehefa tafangona nanodidina azy ny sakaizany akaiky dia nahatsindry ny efitrano ny fahatsapana fiadanana mahagaga. Tampoka teo dia nisokatra ny masony tamin'ireo izay tao anaty efitrano ary namirapiratra tamin'ny tarehy marevaka izy fa nahita ny Tompo ary ny zavatra rehetra nosoratany dia tsy nahavita nanao ny rariny. Taorian'izay dia natory milamina izy, ny Ohabolana 1,7: 9,10 sy XNUMX:XNUMX momba izany, ny fahatahorana ny Tompo no fiandoham-pahalalana sy fahendrena. Midika izany fa ny fahalalana sy ny fahendrena dia afaka miorina amin'ny fahatahorana ny Tompo fotsiny ary tsy afaka mitoetra raha tsy misy azy. Ilaina ny fepetra ilaina io vao afaka miatrika ny fiainantsika andavanandro. Ny fahatahorana ny Tompo no fiandohana: "Ny fahatahorana an'i Jehovah no loharanon'aina, mba tsy handavan'ny famatoran'ny fahafatesana" (Ohab 14,27: XNUMX), Raha mankasitraka sy manaja an Andriamanitra noho ny maha izy azy ianao, dia hitombo ny fahalalanao sy ny fahendrenao. Raha tsy matahotra ny Tompo isika dia manala ny tenantsika amin'ity harena sarobidin'ny fahendrena sy fahalalana an'Andriamanitra ity. Ny Fanantenan'ny Baiboly ho an'ny rehetra dia mandika ny andininy faha-7 toy izao: "Ny fahalalana rehetra dia manomboka amin'ny fahatahorana an'ny Tompo."
Ao amin'ny bokin'ny ankizy "The Wind in the Willows" nataon'i Kenneth Graham, ny mpandray anjara lehibe - rat sy mole - dia mitady zaza otter ary tafintohina eo anatrehan'Andriamanitra.
Tampoka teo dia nahatsapa tahotra lehibe ny mola ka nanova ny hozatra ho rano, nanondrika ny lohany ary namaky ny tongony tamin'ny tany. Na izany aza dia tsy natahotra izy, nahatsapa milamina sy faly. "Rat", manana rivotra hitsoka azy izy ary nanontany tamim-pifaliana, "Natahotra ve ianao?" "Matahotra ve?" Ratsy tara, maso feno fitiavana tsy hay lazaina. "Aza matahotra! Eo anoloany? Sanatria izany! Ary mbola… ohatrinona, matahotra aho! ”Ary niankohoka tamin'ny tany izy roa ary nivavaka.
Raha te-hiaina an'Andriamanitra amin'ny fanetren-tena koa ianao ary hahatalanjona, afaka ny vaovao tsara. Nefa aza manandrana manao izany. Mangataha amin'Andriamanitra mba hametraka izany tahotra izany aminao (Fil2,12: 13-XNUMX). Mivavaha isan'andro ho anao. Saintsaino ny fahagagana nataon'Andriamanitra. Andriamanitra sy ny zavatra noforoniny dia mahagaga. Ny fahatahorana ny Tompo no fihetsikay azy rehefa mahatsapa hoe iza marina Andriamanitra ary rehefa mahita ny fahasamihafana lehibe eo amintsika sy Andriamanitra. Hamela anao tsy hiteny izy.